अब ‘गोठदेखि ओठ’ सम्म खाद्य स्वच्छता « Loktantrapost
अब ‘गोठदेखि ओठ’ सम्म खाद्य स्वच्छता
७ माघ २०७६, मंगलवार १९:०६
मेचीनगर । नेपाल डेरी एशोसिएसनको २१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा मेचीनगरको धाइजनमा मङ्गलवार डेरी, पानी, तेल उद्योगीसँग खाद्य स्वच्छता बारे छलफल गरिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय भद्रपुरको आयोजना र नेपाल डेरी एशोसिएसन झापाको सहआयोजनामा चारआली खानेपानीको सभाहलमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनदेखि उपभोगको चरणसम्म स्वच्छता हुनु पर्नेमा जोड दिइयो ।
मानव स्वास्थ्यका लागि चाहिने खाद्य पदार्थको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभिन्न रोगहरु निम्तने गरेको बताइएको छ । गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छता कायम गर्नु सकियो भने मात्रै त्यसले मानव स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने सहभागीहरुले औंल्याएका छन् ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनका प्रदेश संयोजक हेमचन्द्र खनालको सभापतित्व तथा मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख विमल आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा पशु भेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र झापा–इलाम प्रमुख डा. गङ्गाराम यादव, दूध उत्पादक सङ्घ झापा सचिव चन्द्रप्रसाद सिग्देल, उद्योगी मीनप्रकाश मैनाली, मेचीनगर १२ वडा सदस्य लीला सुब्बा राजवंशीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजन चिमरियाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको स्वागत खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भरतबहादुर पुरीले गरेका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाईपालक किसान, डेरी व्यवसायी, वितरक, उद्योगी लगायत २५० जना किसानको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागीहरुलाई खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भरतबहादुर पुरी, पशु भेटनरी अस्पतालका प्रमुख डा. गङ्गाराम यादव, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका प्रमुख छविलाल खतिवडाले खाद्य गुणस्तरका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए ।
झापामा दूग्ध व्यवसाय फस्टाउँदै गएकाले स्वच्छताका विषयमा केन्द्रित रहेर किसानहरुलाई जानकारी गराउने प्रयास भएको डेरी एशोसिएसन केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजन चिमरियाले बताए । उनका अनुसार झापामा १२० भन्दा बढी व्यावसायिक गाईफाम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, ६ वटा ठूला र ७५ वटा साना डेरी उद्योगहरु रहेको उनले बताए । ती उद्योगबाट दैनिक दूध तथा दूग्धजन्य परिकार उत्पादन र बिक्री भइरहेको छ । झापाका डेरी उद्योगबाट उत्पादित दूध झापा, मोरङ, सुनसरी तथा काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको छ । झापासहित प्रदेश नं १ नै दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।